tamin'ny admin tamin'ny 18-09-20
Inona ny diamondra lafo indrindra eto an-tany? Rehefa tsy azo atao ny mamaritra ny sandany, angamba azontsika jerena ny vidin'ny peratra diamondra amin'ny alàlan'ny diamondra lafo indrindra sy lafo indrindra amin'ny tantaran'ny lavanty. Ireo dia namorona peratra diamondra manan-tantara tamin'ny tantaran'ny au ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-07-02
Ny diamondra novokarina dia niseho tany am-piandohan'ny taona 1950. Na izany aza, vao tsy ela akory izay, ny vidin'ny famokarana diamondra dia nanomboka ambany be kokoa noho ny vidin'ny diamondra fitrandrahana. Ny farany fandrosoana ara-tsiansa sy ara-teknolojia dia nampihena be ny vidin'ny famokarana o ...
Rehefa ho avy ny Fetin'ny Lohataona, inona no halefa any amin'ny TA hampifaly azy na dia mitsiky eo imasony aza? Lingling dia milaza aminao fa ampy ny firavaka vatosoa. Ny dikan'ny firavaka samihafa dia maneho teny miafina fitiavana. Azonao fantarina ve raha afaka maminavina tsara ny TA? Vakana - Fitiavana ...
Nanafina ireo teny miafina ireo ilay vatosoa. Azony vinavina ve izany?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-04-15